Daabac Kaarka Aqoonsiga - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xubin Is-Adeeg > Daabac Kaarka Aqoonsiga
Soo dejiso, daabac, ama beddel Kaarkaaga Aqoonsiga Macaashka ee Medicare.
Had iyo jeer qaado kaarkaaga Aqoonsiga Faa'iidada Medicare ee CHPW. Waxaad u baahan doontaa markaad aragto dhakhtar ama bixiye daryeel caafimaad kale ama aad buuxiso warqad dhakhtar.
Ma u baahan tahay kaarka Aqoonsiga?
Haddii aad u baahan tahay kaar beddel ah ama aad rabto inaad daabacato nooc ku meel gaar ah, soo gal ama sameysato akoon cusub xarunta xubinta. Haddii dhibaato kaa haysato gelitaanka, dhagsii xiriirka "Forgot Password" si aad dib ugu dajiso lambarkaaga sirta ah. Waa inaad taqaan magacaaga isticmaale si aad dib uguhesho lambarkaaga sirta ah. Haddii aad ilowday magacaaga isticmaale, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad sameyso xisaab cusub.
Kaadhka Aqoonsiga Daabacaadda
Haddii aad ku cusub tahay barnaamijka 'CHPW Medicare Advantage', waxay qaadataa qiyaastii toddobaad inaad ku hesho kaarkaaga aqoonsiga laga bilaabo wakhtiga aad iska qortay qorshahaaga. Kaarkaaga Aqoonsiga ayaa laga yaabaa inuu socdo.
Haddii aadan haysan kaarkaaga Aqoonsiga, bixiyeyaasha shabakadda naga dhexeysa, isbitaalada, iyo farmashiyayaasha ayaa si toos ah noogu xaqiijin kara caymiskaaga, marka ha ka waaban inaad hesho daryeel haddii aad u baahan tahay.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad ka helitaanka koontadaada myCHPW ama daabacaadda kaarkaaga Aqoonsiga, wac adeegga macmiilka ee 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1) laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 galabnimo, toddobo maalmood usbuucii.
Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo ee Ku Saabsan Kaarka Aqoonsiga
Sideen dib ugu cusbooneysiin karaa eraygayga sirta ah haddii aan hilmaamo magacayga adeegsade?
Waxaad u baahan tahay inaad ka wacdo adeegga macaamiisha 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1).
Hadda ayaan iska diiwaangaliyay, goorma ayaan helayaa kaarka aqoonsiga?
Waxaad ku heli doontaa aqoonsigaaga 30 maalmood oo shaqo gudahood. Haddii aad hadda u baahan tahay kaarkaaga, waxaad ka daabacan kartaa nuqul akoonkaaga myCHPW.
Hadda waxaan helay kaar aqoonsi oo cusub, laakiin kaarkayga cusub iyo kii hore ayaa sheegaya isla wixii saxda ahaa. Midkee ansax ah?
In kasta oo macluumaadka ay isku mid noqon karaan, kaarkaaga cusubi waa midka ansaxa ah. Waad iska tuuri kartaa kaarkii hore mana awoodi doontid inaad adeegsato markii aad arkayso bixiyeyaasha maadaama xaaladuhu is beddeleen.
Ma jiraa kaar aqoonsi oo gaar ah oo ilkaha ama aragga?
Kaarkaaga Aqoonsiga CHPW waa kaarka kaliya ee aad u baahan tahay waxaana loo isticmaali karaa caafimaadka, ilkaha iyo aragga.
Macluumaadkeygu waa khaldan yahay. Sideen ku hagaajiyaa
Haddii macluumaadka ku khaldan yahay kaarkaaga aqoonsiga ee hadda, fadlan wac Adeegga Macaamiisha ee 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1) laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 galabnimo, toddobo maalmood usbuucii. Waxaad u baahan doontaa inaad daabacato nuqul cusub oo kaarkaaga Aqoonsiga ah markii macluumaadkaaga la cusbooneysiiyo ama waxaad weydiisan kartaa Adeegga Macaamiisha inay nuqul boostada kuugu soo diraan.
Waa maxay macluumaadka ku qoran kaarka aqoonsiga?
Kaarkaaga Aqoonsiga waxaa ku jira lambarkaaga xubinta, magacaaga, iyo macluumaadka ku saabsan daryeel bixiyahaaga koowaad.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 17, 2019